Sofak & Damos Themes Pack for Windows 7...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Sofak & Damos Themes Pack for Windows7လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အနက်ရောင် Themes လေးတွေကို လိုချင်တဲ့သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ...! သူငယ်ချင်းတို့ သုံးရတာ အဆင်ပြေလိမ့်မည်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...! စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့လင့်က ယူသွားနိုင်ပါတယ်...!
Copy All Files to : C:WINDOWSResourcesThemes
Click the Theme file
" Minus..." ( 8.86 MB )
No Response to "Sofak & Damos Themes Pack for Windows 7...!"